I-15 zeYunivesithi ezingabizi kakhulu eYurophu zaBafundi beZizwe ngezizwe 2022
I-15 zeYunivesithi ezingabizi kakhulu eYurophu zaBafundi beZizwe ngezizwe
Eli nqaku libonisa uluhlu lweeyunivesithi ezingabizi kakhulu eYurophu zabafundi bamanye amazwe, iifizi ezihlawulwa ngabafundi bamanye amazwe kwezi zikolo ziya kukuonwabisa! Ezinye zezikolo ezixhaswe ngurhulumente eYurophu zisebenzisa imfundo yasimahla ngokupheleleyo kwaye abafundi bahlawula nje umrhumo ongaphantsi kwe- $ 300 kwisemester nganye.
Kufanelekile ukuba uqaphele, ezi zikolo zibiza ixabiso eliphantsi kubafundi baseYurophu.
Kukho ezinye izikolo ezinokuthi zingabizi mali ininzi zabafundi basekhaya kodwa azizukubiza ixabiso eliphantsi kubafundi bamanye amazwe ke kolu phando sigqibe kwelokuba sibeke umdla ngakumbi ekufumaneni izikolo eYurophu ezingafundanga kwaphela okanye ezinikezela ngeefizi zokufunda eziphantsi kakhulu abafundi bamanye amazwe.
Ngokubanzi, izikolo ezibonelela ngemirhumo efikelelekayo kubafundi bamanye amazwe zifikeleleke ngakumbi kubafundi basekhaya.
Ngaba ngokwenene ndingafunda eYurophu simahla?
Ngawaphi amazwe aseYurophu angabizi kakhulu kubafundi bamanye amazwe ukuba bafundwe?
Amazwe angama-10 aphantsi eYurophu kubafundi bamazwe ngamazwe;
Iindleko zokuphila eYurophu kubafundi
I-15 zeYunivesithi ezingabizi kakhulu eYurophu zabaFundi beZizwe
IYunivesithi yasimahla yaseBerlin, eJamani
IYunivesithi yasePisa, e-Itali
IYunivesithi yaseHeidelberg, eJamani
IYunivesithi yaseBasel, eSwitzerland
IYunivesithi yaseWurzburg, eJamani
IYunivesithi yaseNovosibirsk State, eRashiya
IYunivesithi yaseGӧttingen, eJamani
IYunivesithi yaseParis-Saclay, eFrance
IYunivesithi yaseFontys yeSayensi eSebenzisiweyo, eNetherlands
Isikolo seSant'Anna seZifundo eziPhambili, e-Itali
IYunivesithi yaseMannheim, eJamani
IYunivesithi yaseRWTH yaseAachen, eJamani
IYunivesithi yaseVienna, eOstriya
IYunivesithi yaseNord, eNorway
IYunivesithi yaseKrete, eGrisi
Ukufumana imfundo okanye isidanga salo naluphi na uhlobo phesheya kuza namathuba, uya kwenza unxibelelwano olutsha lwamazwe aphesheya, ufunde iindlela ezahlukeneyo zokuphila kunye nenkcubeko yabanye abantu kwaye wonwabele ezinye iindlela ezimangalisayo eziza nokufunda phesheya. Ngamava amangalisayo kunye nendlela entle yokufunda nayo.
Zonke ezi kunye nangaphezulu zizinto ozifumanayo xa ufunda eYurophu kwaye oku ikwangaphandle kwemfundo ekumgangatho wehlabathi uya kufumana nayo.
Ngelixa ufundela ekhaya ayisiyombono imbi ngokuxhomekeke ukuba uvela phi, ukufunda kwelinye ilizwe ngokuqinisekileyo kuya kukunika ithuba ngaphezulu kwabo bafundela ekhaya njengamava akho aphesheya anokwenza ixabiso elongezelelekileyo njengomqeshwa wexesha elizayo.
Ungaqala ukuzibuza, nokuba kwezi zibonelelo kutheni abafundi abaninzi bengayokufunda eYurophu, ewe, kungenxa yokuba kuyabiza kwaye uninzi lwaba bafundi abanomdla bayenza uphando ukuze bafumane iiyunivesithi zaseYurophu ezingabizi kakhulu. Kungenxa yoko le nto sigqibe kwelokuba siye ngaphezulu ukuze sizise olu lwazi kwiminwe yakho.
Ngokwenyani unokufumana iiyunivesithi ezingabizi kakhulu zokufunda eYurophu okanye umthombo wamathuba okufunda anokuxhasa ngemali imfundo yakho eyunivesithi yaseYurophu kodwa izifundiswa akukho lula ukuzifumana ukuze ukhethe olona khetho kukuncamathela kukujonga ezinye zeyunivesithi ezingabizi kakhulu kufunda eYurophu kumfundi wamazwe aphesheya kwaye ufake isicelo kubo.
Hayi, jonga yile nto inqaku eli malunga nayo. Nanku umthombo wakho ekufumaneni ezona yunivesithi zibiza imali encinci zokufunda eYurophu. Ndilwenzile lonke uphando olunzulu malunga nomxholo kwaye ndibeka iiyunivesithi ezingama-15 zexabiso eliphantsi eYurophu zabafundi bamanye amazwe.
Inyaniso iyaxelelwa, awungekhe ufunde eYurophu simahla ngaphandle kokuba usebenzise amanye amathuba anje ngezifundo, ukuthatha imali-mboleko, ukugcina imali, emva koko inokusebenza. Nokuba kule meko, kuphela kukhetho lokufunda lubonakala lusenza into eninzi kodwa njengoko benditshilo ngaphambili ezi bhasari azikho lula ukuzifumana, ziyakhuphisana kakhulu.
Ke, kutheni ungathathi nje unikezelo lwexabiso eliphantsi kwezinye zeeyunivesithi zaseYurophu, zigcinele ubunzima bokufumana isifundi, yiya kwenye yeeyunivesithi ezinamaxabiso aphantsi aseYurophu endikhe ndazidwelisa apha ngezantsi, ndihlawule imali encinci okanye ndingafumani mali yokufunda, funda Kwinqanaba lakho, ligqibe kwaye uqale ikhondo lomsebenzi othembisayo.
Le yenye indlela yokunciphisa iindleko zakho zemfundo, ukhetha indawo efikelelekayo yokufunda eYurophu idityaniswe nenye yeyunivesithi ezingabizi kakhulu naseYurophu.
Apha ngezantsi kukho uluhlu lwamazwe angama-10 aphantsi kakhulu eYurophu. Ngaphezulu kolu luhlu yiJamani, kungafuneka wazi ukuba iJamani iphelisile iifizi zokufunda kuzo zonke iiyunivesithi zikarhulumente zabafundi bamanye amazwe nabasekhaya ukusukela nge2014.
Iindleko zokuhlala kwezi ndawo ziphantsi ngokomyinge kunye noluhlu $ 7,000 - $ 9,000 qho ngonyaka ekufuneka ngokuqinisekileyo ingene kuhlahlo-lwabiwo mali lomfundi wamanye amazwe ngaphandle kwengxabano.
Kulungile, lixesha eliphezulu lokuba nditshone kumxholo ophambili kwaye ngaphandle kokuqhubeka, ndiza kudwelisa ezona yunivesithi zibiza imali encinci eYurophu zabafundi bamanye amazwe.
KwiYunivesithi yaseGEttingen, eJamani
Ngaba ucinga ukuba le yunivesithi "isimahla" ngenxa yegama layo? Kulungile, unyanisile, le yunivesithi yenye yeeyunivesithi ezingabizi kakhulu eYurophu zabafundi bamanye amazwe kwaye iqhuba imfundo yasimahla.
IYunivesithi yasimahla yaseBerlin ayihlawulisi nayiphi na imali yokufunda kodwa kukho ezinye iintlawulo eziqhelekileyo ezixabisa malunga ne- € 312.89 ehlawulwa ngeseshoni nganye ebandakanya umrhumo wobhaliso, inkonzo yenkxaso yabafundi, itikiti lothutho kunye nemirhumo yemanyano yabafundi.
Nangona kunjalo, ezinye iinkqubo zokuthweswa isidanga kunye nezokuthweswa isidanga azikho simahla kuya kufuneka unxibelelane neyunivesithi ukuze wazi ngezi nkqubo kunye neentlawulo ezinxulumene noko kodwa abafundi abenza isidanga sokuqala bangafunda simahla kuluhlu lwezifundo ezinikezelwa yiyunivesithi.
Abafundi bamazwe ngamazwe:
Ezinye iimali: € 312.89
IYunivesithi yasePisa, ElamaTaliyane
IYunivesithi yasePisa ikwabizwa ngokuba yi-UniPi, ebekwe e-Itali kwaye yasekwa ngo-1343 yeyona indala kunye ne-6th eyona yunivesithi ilungileyo e-Itali. I-UniPi iyakwazi ukuyenza ukuba iye kuluhlu lweeyunivesithi eziphantsi zokufunda eYurophu zabafundi bamanye amazwe ngenxa yemali yokufunda efikelelekayo.
Iyunivesithi inoluhlu lweenkqubo zesidanga sokuqala ezixabisa i-2,500 yeedola ngonyaka kunye nenkqubo yesidanga se-master ebiza i- $ 2,307 ngonyaka ngabafundi bamanye amazwe. Uya kuvuma nam ukuba ezi ziindleko eziphantsi kakhulu zokufunda xa kuthelekiswa neyunivesithi eqhelekileyo enolu hlobo.
Imasters: $ 2,307
Igraduate: $ 2,500
Njengeyunivesithi yophando yoluntu esekwe kwi-1386 kwaye ibonelela ngeenkqubo ezahlukeneyo zokuthweswa isidanga kunye nesidanga sokuqala, IYunivesithi yaseHeidelberg yenza ukuba uluhlu lweeyunivesithi ezinamaxabiso aphantsi eYurophu zabafundi bamanye amazwe.
Abafundi bamanye amazwe abavela kwi-European Union (i-EU) kunye ne-European Area Area (EEA) amazwe ahlawuliswa umrhumo we- € 171.75 wokufunda kwiDyunivesithi yaseHeidelberg kwaye igubungela iindleko zolawulo, igalelo lentlalontle leenkonzo zabafundi, umanyano wabafundi, ukupasa nokudlula Ukusetyenziswa kwe nextbik ukuba iinkonzo.
Ngelixa abafundi bamanye amazwe abavela kwi-non-European Union (i-EU) nakwimimandla engeyiyo eyaseYurophu yezoQoqosho (i-EEA) amazwe kufuneka ahlawule i- $ 1,500 kwisemester nganye.
Nangona kunjalo, iifizi ezizodwa zihlawuliswa ngokuqhubeka kwemfundo kunye neenkqubo ezikhoyo ezingahambelaniyo zenkosi oya kuthi unxibelelane nesikolo ukuze wazi ngakumbi.
Abafundi bamanye amazwe (i-EU): € 171.75
Abafundi bamanye amazwe: € 1,500
Kubalwa phakathi kwamaziko aphambili emfundo ephezulu eSwitzerland kwaye yasekwa kude kudala i-1460, iYunivesithi yaseBasel yamkelwe phakathi kweyona yunivesithi zibiza imali encinci eYurophu kubafundi bamanye amazwe, ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuthweswa isidanga kunye neenkqubo zesidanga sokuqala kubafundi.
Abafundi besidanga sokuqala kunye nabaphumelele KwiYunivesithi yaseBasel bahlawuliswa i- $ 1,714 ngonyaka njengemirhumo yokufunda.
Abafundi bamanye amazwe: $ 1,714
Ndiqinisekile ukuba "iWurzburg", eligama lesiJamani, alithethi “ukukhululeka” kodwa iYunivesithi yaseWurzburg, eyunivesithi yophando eyaziwayo yoluntu eJamani liziko elingenakufundiswa kwabafundi bamanye amazwe ke oko kulwenza ukuba lube luluhlu lweyona yunivesithi zibiza kakhulu eYurophu zabafundi bamanye amazwe.
Nangona kunjalo, abafundi bamanye amazwe baya kwenza intlawulo ye- $ 137.90 egubungela igalelo labafundi kunye neetikiti zesemester.
Eminye imirhumo: € 137.90
Yothuswa leli ziko kuluhlu lweyona yunivesithi zibiza imali encinci eYurophu zabafundi bamanye amazwe? Ngaphandle kokuba awukayazi okwangoku.
IYunivesithi yaseNovosibirsk State okanye i-NSU, njengoko isaziwa njalo, lelinye lamaziko emfundo aphakamileyo eRashiya kwaye ingoyena mvelisi uphambili kuninzi lwabaphumeleleyo kwezemfundo eRashiya.
Iyunivesithi ithathwa kakhulu kwimisebenzi yophando kwezenzululwazi kwaye inikezela ngeenkqubo ezahlukeneyo zesidanga sokuqala kunye nesidanga sokuqala somfundi ngamnye ofundiswa ngesiNgesi nangesiRashiya.
Nantsi indawo elungileyo.
Nokuba inqanaba liphezulu, i-master's kunye neenkqubo zesidanga sokuqala kunye nokuduma kwayo, abafundi bahlawula nje i-3,000 yeedola ngonyaka njengemirhumo yokufunda.
Abafundi bamanye amazwe: $ 3,000
Nantsi eyunivesithi yophando eyaziwayo kwilizwe liphela kuluhlu lwethu lweeyunivesithi ezingabizi kakhulu eYurophu zabafundi bamanye amazwe.
Oku kuya kusiba ngcono nangcono, ndiyabheja ukuba ucinga ukuba iiyunivesithi ezikolu luhlu azinyangi ngenxa yokuba zitshiphu ngendlela emangalisayo, ndiqinisekile ukuba ingqondo yakho iyabethwa ngumoya ngoku.
At KwiYunivesithi yaseGӧttingen, Abafundi bamazwe aphesheya bahlawula malunga ne- € 760 ngonyaka egubungela ukubhaliswa kunye nokubhaliswa kwakhona kwiisemester zokuqala nezesibini.
Abafundi bamanye amazwe: € 760
IYunivesithi yaseParis-Saclay liziko elinomdla lophando olwenzileyo kuluhlu lwethu lweeyunivesithi eziphantsi zokufunda eYurophu zabafundi bamanye amazwe.
ISaclay ibonelela ngesidanga sokuqala, iinkosi kunye neenkqubo zobugqirha kubafundi abanomdla abanemali yokufunda ephantsi kakhulu ukuba ingajongeka iyinyani.
Imali yokufunda kwinkqubo yesidanga sokuqala kwiDyunivesithi yaseParis-Saclay yi- € 170 ngonyaka, i- € 243 ngonyaka ngenkqubo yenkosi kunye ne- € 380 ngonyaka nge-Ph.D. Inkqubo.
Ngaba ayisiyongqondo le? Zijongeke ziyinyani ngokwenene kodwa unokuzifumanela ngokwakho ukuqinisekisa ukuba siyenzile le nto ukuze sikuthandise. Ngokwenene uyababona apha.
Iinkosi: € 243
PhD: € 380
Isidanga sokuqala: € 170
Ukwahlula phakathi kwiiyunivesithi eziphambili eNetherlands ngokukodwa kwimimandla yobunjineli, i-IT, i-logistics, ukuphathwa kwezoshishino kunye nokuphathwa, kwaye ineenkampu ezininzi ezisezantsi kweNetherlands. Inkqubo ye- IYunivesithi yaseFontys yeNzululwazi eSetyenzisiweyo yenza ukuba kuluhlu lwethu lweeyunivesithi ezingabizi kakhulu eYurophu zabafundi bamanye amazwe.
Iifonti zinikezela ngee-bachelor ezahlukeneyo, iinkosi kunye neenkqubo zexesha elifutshane ezineefizi zokufunda eziza kukushiya kwizimanga.
Abafundi bamanye amazwe abavela kwi-European Union (i-EU) kunye ne-European Area Area (EEA) amazwe ahlawula umrhumo osemthethweni wokufunda i- $ 2,143 ngelixa abafundi abavela kula mazwe bengahlawuli umrhumo we- € 7,920. Ezi ntlawulo zinokubonakala ziphakamile kuthathelwa ingqalelo ezinye izikolo ezikolu luhlu kodwa xa uzithelekisa nezinye iiyunivesithi zamanye amazwe phaya uya kuvuma nam ukuba zifikeleleka kakhulu.
Abafundi bamanye amazwe (i-EU): € 2,143
Abafundi bamanye amazwe (abanye): € 7,920
Eli liziko lophando loluntu eliqhutywa kwicandelo lesayensi esetyenzisiweyo, esekwe kwi-1987 kunye nehabhu yokufundisa ngokugqwesa kunye nemfundo ekumgangatho wehlabathi kwizifundo ezahlukeneyo ze-masters, zesidanga sokuqala kunye neenkqubo ze-PhD.
Isikolo seSant'Anna kwizifundo eziphambili Kuluhlu lweeyunivesithi ezingabizi kakhulu eYurophu zabafundi bamanye amazwe abaneemali zokufunda zero kwiinkqubo zesidanga sokuqala ngelixa abafundi abaphumeleleyo bafunda iifizi ukusuka kwi- € 7,000 - € 10,000.
IiMasters / PhD: € 7,000 - € 10,000.
Le yunivesithi yoluntu enzulu yophando esekwe kwi-1967 kunye nendawo yokukhulisa nokukhulisa amandla akho, ukubonelela ngeenkqubo ezahlukeneyo zesidanga kunye nezesidanga.
IYunivesithi yaseMannheim yenye yeeyunivesithi ezingabizi kakhulu eYurophu zabafundi bamanye amazwe ukuba baqhubeke namaphupha abo ezifundo kunye neefizi zokufunda ezingabizi mali eyi- $ 1,500 kwisemester nganye ke abafundi bamanye amazwe baya kuhlawula i-3,000 iyonke ngonyaka.
Ngelixa kukho imali yokufunda ehlawulwa kwesi sikolo, kusekho okwahlukileyo. Ukuba ungumfundi wamazwe aphesheya kodwa unemvume yokuhlala eJamani phantsi kwemiqathango ethile onokuyifumana kwiwebhusayithi yaseyunivesithi awuzukuhlawula mali yokufunda.
Isidanga sokuqala: € 1,500
Le yeyona yunivesithi inkulu kwezobuchwephesha kulo lonke elaseJamani kwaye ibonelela ngeenkqubo zesidanga sokuqala kunye nesidanga sokuqala ukuphuhlisa nokuzilolonga kwizakhono zakho kwicandelo kunye nenqanaba lokufunda olithandayo.
Akusayi kuphinda kumangalise ukuba iyunivesithi yodumo iphakathi koluluhlu lweeyunivesithi ezingabizi kakhulu eYurophu zabafundi bamanye amazwe.
Nangona kunjalo, kukho iifizi zezifundo ezinemiqathango KwiYunivesithi ye-ATHhen yase-ATHhen kwaye isebenza kubafundi bamanye amazwe. Ngokubanzi, abafundi kulindeleke ukuba benze igalelo lomfundi kwisemester ye- $ 299.38 kwisemester nganye.
Eminye imirhumo: € 299.38
Le yeyona yunivesithi inkulu neyaziwayo yaseYurophu kwaye likhaya kubaphengululi abaninzi bembali abanegalelo elifanelekileyo eliye laqatshelwa ngokufanelekileyo. IYunivesithi yaseVienna isenokungabonakali njengenye kodwa ke iphakathi kweyona yunivesithi inexabiso eliphantsi eYurophu kubafundi bamanye amazwe.
Iyunivesithi ibonelela ngeenkqubo ezahlukeneyo kwizidanga zokuqala, iimasters kunye nenqanaba lokufunda lobugqirha ngeendlela ezahlukeneyo zokufunda.
Njengomfundi wamazwe aphesheya ovela kumazwe e-EU / EEA, awunyanzelekanga ukuba uhlawule iifizi zokufunda ngexesha lesidanga senkqubo yesidanga sakho kunye neesemesta ezimbini zokunyamezelana kodwa kuya kufuneka uhlawule umrhumo womanyano wabafundi i-20.20.
Abafundi bamanye amazwe abavela kumazwe angengawo e-EU / e-EEA kuya kufuneka bahlawule imali yokufunda yonyaka ye- € 726.72 kunye ne- € 20.20 yemali yomanyano yabafundi kwi-semester nganye.
Abafundi bamanye amazwe (i-EU / EEA): NA
Eminye imirhumo: € 20.20
Abafundi bamanye amazwe (abanye): € 726.72
Le yeyona yunivesithi incinci kolu luhlu, esekwe kwi-2016 kwaye ibonelela ngeenkqubo ezahlukeneyo ze-bachelor's, masters kunye neenkqubo zobugqirha zokuphuhlisa nokukhulisa izakhono zakho, IYunivesithi yaseNord ikwayenye yeeyunivesithi ezingabizi kakhulu eYurophu zabafundi bamanye amazwe.
I-Nord ayihlawulisi nayiphi na imali yokufunda kodwa abafundi kuya kufuneka bahlawule imali ye-semester ye-NOK725 eyi- $ 77 ebandakanya iindleko zolawulo kwaye inegalelo kwiinkonzo zentlalontle yabafundi.
Isidanga sokuqala: NA
Abafundi bamanye amazwe: NA
Ezinye iifizi: $ 77
Yasekwa ngo-1973 kwaye yazibophelela ngokugqwesa kuphando nasekufundiseni, i KwiYunivesithi yaseKrete ubonelela ngezifundo ezahlukeneyo zesidanga sokuqala, iinkosi zemfundo kunye nezidanga zobugqirha zabafundi ukuze bajoyine, bafumane ulwazi kunye nokuphuhlisa izakhono zabo
IYunivesithi yaseKrete, nayo, yenye yezona yunivesithi zibiza kancinane oza kuzifumana eYurophu zabafundi bamanye amazwe kwaye AKUFUNI ukubiza iifizi zokufunda kubemi base-EU ababhalise kwiinkqubo zakhe zesidanga sokuqala.
Kuphela zi-11 ze-52 iinkqubo zokufunda kwizidanga zokufunda ezinikezelwa kwiDyunivesithi yaseCrete ezineefizi zokufunda kodwa akukho mali yokufunda ye-Ph.D. abafundi.
Masters: Malunga ne-2000 yeedola
Eminye imirhumo: NA
Apho unoluhlu lweeyunivesithi ezingabizi kakhulu eYurophu zabafundi bamanye amazwe, yinto entle, enomdla yokufunda, akunjalo? Ndikonwabele ukuyibhala kwaye ndiyavuya kuba ndikwazile ukumba ezi zikolo ngenxa yakho.
Ngoku ukuba unazo ezi nkcukacha ngokulandelayo? Unikwe zonke iinkcukacha ezibalulekileyo ngokubhekisele kwiiyunivesithi ezingabizi kakhulu eYurophu zabafundi bamanye amazwe nabasekhaya njengoko ndibhalile ngaphambili.
La ngamaziko ahloniphekileyo aya kukunika into oyifunayo kwindawo yokufunda, nokuba ungowesidanga, iinkosi okanye izidanga zobugqirha, ezi yunivesithi zikunika isitya segolide kodwa kushiyekile ukuba wolule izandla kwaye ubambe ithuba.
Ndiyazi ukuba isihloko bekufanele ukuba sikwiiyunivesithi ezingabizi kakhulu eYurophu kodwa ngokuqinisekileyo ndiye ndawela umgca kancinci ngokukhankanya iiyunivesithi zasimahla eYurophu nazo, ndiyaqikelela ukuba umnqamlezo wawufanelekile.
Uyifumana njani i-PhD e-Australia eneScholarship
I-15 i-Scholarship exhaswa ngemali ngokupheleleyo yaBafundi beZizwe ngeZizwe eYurophu ngoku
Ulwabiwo-mali lukaRhulumente lwe-10 lokuFunda kwelinye ilizwe ngesicelo sasimahla
Isifundo kwamanye amazwe Isikhokelo IiYunivesithi eziFundayo eziNcinci
Iiyunivesithi ezingabizi kakhulu eYurophu zabafundi bamanye amazweIidyunivesithi eziphantsi zokufunda eYurophu zabafundi bamanye amazweIzifundo zasimahla kwiiyunivesithi zaseYurophu zabafundi bamanye amazwe
Post Previous:I-13 yeZibonelelo eziPhezulu zaBafundi abangaFundisiyo
Okulandelayo Post:I-13 yeeDyunivesithi eziPhezulu zeYunivesithi eKenya
Pingback: 13 Izizathu Ezikhethekileyo Zokuba Imfundo Ibalulekile
Novemba 5, 2021 kwi-12: 49 pm
C'est vraiment intéressant ce site, kwi trouve facilement ce qu'on veut savoir ici. Un bravo okanye concepteur.
Pingback: IiYunivesithi zesiNgesi eMpuma Yurophu-Eyona Kholeji yePortal
UFakhar abbas uthi:
Julayi 4, 2021 kwi-11: 39 am
Ndinomdla kwezi yunivesithi.
Kwaye ndifuna ukwamkelwa eJamani.
Ndiyathemba ukuba uyakuyamkela inkqubo yam yesicelo kunye nempendulo kum. Ndiyathemba ukuba ndizama ukugqibezela okanye ukufeza into oyifunayo Ngaba ungandithumela inombolo yakho ye-watsap yeyunivesithi okanye i-imeyile eluncedo kum ukuba ndichukumise ngohlaziyo olutsha.